ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်ပြီး အလျှံပယ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ထိ လာဘ်ဝင်စေတဲ့ ဂါထာတော်ကြီး
ဂါထာမန္တန်တွေဆိုတာ တကယ်အစွမ်းထက်ပါတယ်…ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သူရဲ့ သီလရယ်…ယုံကြည်သက်ဝင်မှုရယ် ပေါင်းလိုက်ရင် တကယ့်ကို အကျိုးရှိစေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခုပြောပြပေးမယ့် ဂါထာတော်ကြီးကတော့ ငွေကြေးအဆင်မပြေဖြစ်နေသူတွေအတွက် ငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်ရုံမက အလျှံပယ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အထိ ချမ်းသာလာစေမယ့် ကျင့်စဉ်ဂါထာတော်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..ဒီဂါထာကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရမယ့် နည်းလေးကိုလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်….
“၂၄ ရက် အဓိဌာန်….နှင်းဆီပန်း ၂၄ပွင့်…ဆီမီး၂၄တိုင်…တံခွန် ကုက္ကား တစ်စုံ…ရေဗူး အကြီးတစ်ဗူး.ဗူး နောက်မှာ အခုသုံး နေ သော ငွေ ၁ သောင်းတန် ..ငါးထောင်တန် ..တစ်ထောင်တန် ..ငါးရာတန် …. နှစ်ရာတန် …တစ်ရာတန် …ငါးဆယ်တန် အားလုံးကိုအထပ်လိုက် လှူဒါန်းရပါတယ်…
ရွတ် ဆိုရမည့် ဂါထာမှာ….((((ဒီဝါ တပတိ မင်္ဂလာ ဂါထာ ၂၄ကြိမ်.. .ဒီဝါတပတိ အာဒိ စ္စော …ရတ္တိမာဘာတိစန္ဒိမာ….သန္န ဒေါ္ဓ ခတ္တိ ယော တပတိ….ဈာယီတပတိ ဗြဟ္မဏော…အထသဗ္ဗ မ ဟောရတ္တံ ဗု ဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ…)))
(((ပဋ္ဌာန်းပါဠိ တော် ၂၄ကြိမ်…………ဟေတု ပစ္စ ယော.အာရမ္မဏ ပစ္စ ယော…အဓိပတိ ပစ္စ ယော.အနန္တ ပစ္စ ယော…သမနန္တရ ပစ္စ ယော.သဟဇာတပစ္စ ယော….အညမည ပစ္စ ယော.နိသာယပစ္စ ယော…ဥပနိသယ ပစ္စ ယော…ပု ရေဇာတ ပစ္စ ယော…ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စ ယော…အာ သေဝန ပစ္စ ယော….ကမ္မပစ္စ ယော….ဝိပါက ပစ္စ ယော…အာဟာရပစ္စ ယော….က္ကန္ဒြိယ ပစ္စ ယော….ဈာနပစ္စ ယော.မဂ္ဂပစ္စ ယော…သမ္ပယုတ္တပစ္စ ယော…ဝိပ္ပယုတ္တ ပစ္စ ယော…အတ္တိပစ္စ ယော…နတ္တိ ပစ္စ ယော…ဝိဂတ ပစ္စ ယော. အဝိဂတ ပစ္စ ယောတိ…)))
ငွေရဂါထာ ၁၀၈ ကြိမ်…(((သဗ္ဗိဝေန ခယခပင်း သုခိ ဥုံပူဇာစ)))အားလုံး ကောင်း ကျိုး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါ စေ..”
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ယုံယုံကြည်ကြည်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ…တကယ့်ကို ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ပြီး အလျှံပယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်…အားလုံးလိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေနော်… Share ထားပြီး ဂါထာလေးတွေ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်…
အခုဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာတွေ့တော့ ဇာတ်တော်ထဲကဝတ္တုတွေ သတိယမိတယ်….ညဘက်ကျရင် ခွေးတွေဟောင်တဲ့အသံ ပိုပြီးကြားကြရတော့မယ်….
မကြားဝံမနာသာ ကြောက်စရာသတင်းတွေ နေရာတိုင်းမှာ ပေါ်ပေါက်လိမ့်ဦးမယ်…..
လျှပ်စစ်မီတာခ ပုံမှန်ထက် ပိုကျနေမှုရှိနေလျှင် သတိပြုရန်